SIKORSKY S-76C ++ v1.5 Parapublic X-Plane 9 - Freeware
Ny Sikorsky S-76 Fanahy dia ara-barotra angidimby, novokarin'ny Amerikana Sikorsky mpanamboatra fiaramanidina Corporation. Izany dia zavatra maro mpanelanelana. Misy fitaovana roa rotors, samy amin'ny efatra lelany sy ny fipetrahana retractable fitaovana.
Modely mahafinaritra ho an'ny X-Plane 9 miaraka amin'ny feo mahazatra sy ny cockpit virtoaly + Custom custom 2D. Ahitana dikan-teny roa: SAR sy EMS ary famoahana telo. Ny fanokafana ny varavarana dia mampiasa ny bokotra Flaps. Tena sarotra ny manidina ity helicopter ity, tena tena marina ny modelin'ny sidina, noho izany dia mety ho an'ny mpanamory fiaramanidina mpiady X-Plane. Zava-dehibe: azafady mba vakio ny fanazavana ara-teknika (PDF).
Noforonina 20 Aug 2012
Nohavaozina taminy 14 Aug 2013
David (DMO) eo X-Plane.org